Google Play chụpụrụ ngwa Global site na ụlọ ahịa | Gam akporosis
Izu a ka ekpughere ya na ụfọdụ ngwa mere aghụghọ wayo, na ịpị na mgbasa ozi na-enweghị ndị ọrụ maara, ewepụla na Google Play. Ngwa ndị a, ngụkọta ihe nbudata dị nde 90, bụ nke Do Global nwere. Companylọ ọrụ nke ọtụtụ anaghị ada ka, mana nke Baidu nwe. Nsogbu ndị dị na ngwa ndị a emeela ka esemokwu dị n'etiti ndị ọrụ.
Ya mere, site na Google Play, emeela usoro doro anya na nke a. N'ihi na ewepụla ngwa ngwa Do Global niile n'ụlọ ahịa. Mkpebi na-adịkarịghị na ụlọ ahịa ngwa. Ọ bụ ezie na ọ na-eme ka o doo anya oke nsogbu a.
Enwere ngụkọta nke ngwa 46 Do Global dị na Google Play. Achụpụla ha niile n'ụlọ ahịa. Ihe kpatara ya bụ na ha niile mara ikpe na-ada iwu nke ndị mmepe. Ọzọkwa, a na-egbochi Do Global na netwọkụ mgbasa ozi mkpanaka, AdMob.
Ọ bụ otu n'ime ndị kasị ibu arụmọrụ na nke a dị nnọọ. Ebe ọ bụ na ndị a ngwa ha gbakwunyere nbudata 600 nde ngụkọta. Nke na-eme ka o doo anya nnukwu ọnụnọ ha nwere n'ụlọ ahịa. Na mgbakwunye na elele nke ụlọ ọrụ ahụ ga-etinye n'akpa ọkwa mgbasa ozi a, na-ahụ oke ha nwere.
Google Play nọ na-akụtu ngwa ndị a ruo nwa oge. Ọ bụ ya mere, ha ga-ewekwa ndị ọrụ ọzọ, nke ị ga-eji nyochaa ma chịkwaa ngwa ndị ebugo na ụlọ ahịa ahụ. O doro anya na nchụpụ nke nnukwu mmadụ dịka Do Global bụ ihe dị mkpa. Ọzọkwa a mma ogbugbu kwupụta ndị ọzọ na mmepe.
Ebe ọ bụ na na Google Play pulse ha agaghị ama jijiji n'oge ịwepụ ụfọdụ n'ime ngwa ndị a nke ụlọ ahịa. Ya mere, ọ gaghị abụ ihe ijuanya ma ọ bụrụ na otu ihe ahụ emee na ụlọ ọrụ ndị ọzọ n'oge na-adịghị anya. Karịsịa ma ọ bụrụ na a ga-ebute usoro nchịkwa ọhụrụ maka ụdị ngwa ndị a.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Gam akporosis » Ngwa gam akporo » Emeghị ngwa Google ka Google Play kwụsị